पहिरोले अवरुद्ध मुग्लिन सडक खुल्यो, एक प्रहरी अझै बेपत्ता
चितवन, असार १३ । मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डको कालीखोला नजिक साढे दुईकिलो भन्ने स्थानमा पहिरो गएपछि आज बिहान ७ः३० बजेदेखि अवरुद्ध भएको सडक केही समय अगाडि खुलेको छ ।
भरतपुरमा च्यातिएका मतपत्र सर्वोच्च ल्याइयो
चितवन, असार १३ । भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १९ को मतगणना विवादबारे सर्वोच्च अदालतले मागेका कागजपत्र र च्यातिएका ९० वटा मतपत्र जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आज काठमाडौँ पठाएका छन् ।
झापा, असार १३ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को तर्फबाट दमक नगरपालिकाका लागि प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनेका रेवतराज पुरी ‘गगन’को घर नजिकै र अर्को एक ठाउँमा पनि बमजस्तो देखिने शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको छ ।
घामले छाला डढ्यो ? यस्तो छ सजिलो उपाय
कतिपयलाई घाममा हिड्दा चिलाउने जस्ता समस्याहरु देखा पर्छ । घाममा हिड्दा साँचै हाम्रो छाला डढ्ने हुन्छ ।
School of kathmandu
काठमाडौं, असार १३ । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा निकट विद्यार्थी सङ्गठन अखिल (क्रान्तिकारी) ले शुल्क वृद्धि फिर्ताको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आज काठमाडौं उपत्यकाका निजी (संस्थागत) विद्यालयमा हड्ताल गरेको छ ।
जताततै आरजुको हस्तक्षेप
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री भएको १५ दिन बितिसक्दा पनि शेरबहादुर देउवाले सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकेका छैनन् ।
नवलपरासीको अतिसंवेदनशील क्षेत्रमा उच्च सतर्कता
नवलपरासी असार १३ । दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुन लागेको नवलपरासीका सातवटा स्थानीय तह लक्षित गरी उच्च सतर्कता अपनाइएको छ ।
काठमाडौं । वर्षा लागेसँगै काठमाडौंको अनामनगर र बिजुली बजारका स्थानीयवासी कतिखेर धोबीखोलाको बाढी घरमा पस्ने हो भन्ने चिन्ताले त्रस्त छन् ।
देउवालाई ओलीको यस्तो सुझाव
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘तानाशाही’को बाटो नरोज्न आग्रह गरेका छन् ।
पिसाबले स्मार्टफोन चार्ज ! कसरी ?
सुन्दा तपाइलाई पत्यार नलाग्न सक्छ तर अब पिसाबबाट पनि स्मार्टफोनको ब्याट्री रिचार्ज गर्न सम्भब हुने भएको छ ।